Iska hor imaad ka dhex qarxay maliishiyada Cusmaan Caato iyo maliishiyo kale oo u daacad ah Ganacsade Maxamed Deylaaf
Illaa sagaal qof ayaa lagu dilay, 20 kalena waa lagu dhaawacay dagaal aan waxba la isula harin oo maanta ka dhex qarxay maliishiyo u daacad ah Cusmaan Caato iyo maliishiyada ganacsade Maxamed Cabdulle (Deylaaf) oo galbinayey gawaari xamuul ah oo sidday raashin uu leeyahay Barnaamijka Cunnada Adduunka (WFP).
Dagaalku waxa uu ka dhacay, welina ka socdaa Ex. Koontarool Afgooye. Maliishiyada Cusmaan Caato ayaa isku dayey inay hor istaagaan gawaaridaasi oo u ku sii jeeday gobollada Bay iyo Bakool, iyagoo doonayey inay ka qaataan lacag canshuur ah oo ay soo rogeen inuu dhiibo gaari kasta oo xamuul sida. Maliishiyada ganacsade Deylaaf waxa ay qandaraas horey ugu qaateen ilaalinta raashin deeq ah oo uu leeyahay hay’adda WFP.
Wax yar kaddib markii uu billowday gacan ka hadalka labada dhinac, waxaa u suura gashay maliishiyada Deylaaf inay xoog ku furtaan jidkaas, ayna dib u riixaan maliishiyadii Cusmaan Caato, hase ahaatee taas ma soo afjarin rasaasta. Dhowr madfaca hoobiyaha ah ayaa ku soo habaabay deegaanno ay deggan yihiin dad rayid ah. Illaa lix boqol oo joogay guryahooda ayaa dhaawacyo ay soo gaareen, waxaana istaagay gawaaridii u kala gooshaysay magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye oo ay waddo u ahayd dariiqa lagu dagaallamayo.
Dad ku dhow hay’adda WFP ayaa shaaca ka qaaday in maliishiyada Cusmaan Caato xalay lala yeeshay wada hadallo ku saabsan in raashin uu maro dariiqaas, hase ahaatee ay arrintaasi ku gacan sayreen. Waxaa lagu warramay inay dalbadeen lacag fara badan. Horey maliishiyadani, waxa ay hor istaagtay in Madaxweynaha KMG ah, Cabdiqaasim Salaad uu maro dariiqaas isagoo ku sii jeeda garoonka Ballidoogle.
Nin ka mid ahaa ilaalo soo laabatay oo sagootisay Madaxweynaha ayaa lagu dilay Ex. Koontarool Afgooye. Dadaal ay wadeen Wasiirka Gaadiidka Badda, Cabdweli Jaamac Warsame iyo Taliyaha ciidanka Booliska gobolka Banaadir Cabdi Xasan Cawaale (Qaybdiid) ayaa socon waayey, kaddib markii maliishiyada Caato ay ku adkeysteen inaysan bannaynin goobta ay fadhiyaan. Odoyaal labada dhinac ah ayaa haatan isku dayaya inay xaaladda qaboojiyaan, hase ahaatee labada maliishiyo ayaa weli isku wada rasaas goosgoos ah. Rasaas wiifto ah ayaa soo gaaraysa meelaha ku dhow dhow dagaalka.